Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी ! हेर्नुहोस् त कतै तपाई पनि पर्नु भयो की ! - Pnpkhabar.com
यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी ! हेर्नुहोस् त कतै तपाई पनि पर्नु भयो की !
सबै मानिसको जन्म कुन्डली जन्मबार र समय अनुसार निर्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मबार र जन्मेको समय निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्मेको बारलाई ग्रहले निकै प्रभाव पारेको हुन्छ ।
बिहिवार : यो बार जन्मने व्यक्ति निके विद्यवान हुने गर्छन् । ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षको उमेर सम्म यो बार जन्मने व्यक्तिलाई संकट पर्नेछ । ३० वर्षका उमेर कटेपछि यो बार जन्मने व्यक्तिको भाग्य फेरिने छ । उनीहरुले सोचेभन्दा बढी सम्पति कमाउने अवसर मिल्नछ ।
शुक्रबार : शुक्रबार जन्मने व्यक्ति निकै मिठो स्वर भएका हुन्छन् । उनीहरु रोमान्च स्वभावका हुन्छन् । यो बार जन्मने व्यक्तिलाई २० र २४ वर्षको उमेरमा कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ । कडा मेहनत र परिश्रम गरेबापत उनहिरुले प्रशस्त भन आर्जन गर्छन् ।
दिवङ्गत आफन्तको सम्झना मनाइने गाईजात्रा पर्व आजदेखि शुरु
आज गाईजात्रा: यस कारण मनाइन्छ गाईजात्रा